Ciyaartoy.com » Zambia oo qaaday koobka qaramada Afrika
CIYAARAHA GOBOLKA MN
Zambia oo qaaday koobka qaramada Afrika Feb 13, 2012 - ujawaab	Xulka kubbadda cagta ee waddanka Zambia ayaa iyagu markii ugu horreysay ku guuleystay koobka 28-aad ee qaramada Afrika oo shalay lagu soo gabagabeeyay waddanka Gabon.
Ciyaarta kama dambeysta oo ay iskugu soo hareen waddamada Ivory Coast iyo Zambia, ayaa waxaa 8-7 gool oo rigooreyaal ah ku badiyay xulka Zambia, kaddib markii waqtigii ciyaarta loogu talagalay ay labada koox isla dhaafi waayeen 0-0.
Sidoo kale, labada koox ayaa 30 daqiiqo ee lagu daray ciyaarta waxay isla dhaafi waayeen 0-0. Mudadii lagu jiray qaybtii danbe ee ciyaarta ayaa laacibka weyn ee reer Ivory Coast, Drogba waxa uu khasaariyay rigoore loo dhigay xulka Ivory Coast daqiiqadii 69-aad.
Guushan ay soo hoysay kooxda Zambia ayaa iyadu ah mid farxad dheerad ah u leh xulka Zambia iyo shicibka waddanka Zambia. Muddo laga joogo 19 sano tariikhduna ahayd April 27, 1993 ayaa waxaa diyaaradii ay saarnaayeen 18 ciyaartoyda xulka qaranka Zambiay iyo 12 qof oo ahaa macalimiin, shaqaale iyo waliba maamulka xiriirka kubadda cagta ee dalka Zambia ay ku dhacday xeebta magaalo madaxda dalka Gabon.
Kooxdii Zambia ee ay diyaaradu la dhacday 1993
Ciyaartoyda iyo xulka qaranka Zambia ee ay diyaaradu la dhacday ayaa waxay kusii jeeden magaalada Dakar, iyaga oo u socday in ay la ciyaaran ciyaar ahayd is reeb reebka koobka aduunka ee 1994 lagu qabtay wadanka Mareykanka, ciyaartaas oo ay la ciyaari lahaayeen dalka Senegal.
Haddaba kooxda xulka Zambia oo iyagu taariikh lama huraan ah u soo hooyay wadankooda ayaa si weyn ugu dabaaldegay guusha ay gaareen. Sidoo kale waxaa dabaaldeg xooggan uu ilaa iyo hada ka socdaan caasimadda Lusaka ee dalka Zambia.
Ugu danbayntii, tartanka koobka qaramada Afrika oo billowday 21-kii January ee sannadkan 2012, ayaa waxaa sanadkan si habsami leh u martigeliyay waddamada Equatorial Guinea iyo Gabon.
Xigashadda sawirrada: AFP
Qalinkii: Abdirahman Mukhtar
Tifatiraha guud ee Ciyaartoy.com
« PreviousIvory Coast through to the final to play Zambia	Next »AC MILAN OO U XOOGSHEEGATAY ARSENAL	Leave a Reply
Afro Deli & Coffee	Ciyaaraha Gobolada Somaliland	MAQAALLO »
DHAGAR QABAHA ISBOORTIGA HALAGA DHEEREEYO
- May 23, 2012	AF IS DHAAF-DHAAFAY AMAAN MA SHEEGO
- Apr 27, 2012	INNAA LILLAAHI WA INNAA ILEYHI RAAJICUUN
- Apr 9, 2012	Gacmo iyo sport midaysan ayaa guul lagu gaari karaa
- Mar 19, 2012	QORSHO XUMO IYO FARAGELIN XAD DHAAF AYAA DILAY XULKEENA
- Dec 28, 2011	Xuska Maalinta Afka Hooyo 2012 Heesta Ciyaaraha 2013	About
© 2012 Ciyaartoy.com - All rights reserved. · RSS Farsamadii AqoonKaal.com